Tongava manam-pahaizana momba ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Tongava manam-pahaizana momba ny haino aman-jery sosialy
Alarobia 1 Janoary 2014 Alarobia 1 Janoary 2014 Douglas Karr
Te hizara an'ity infografika ity aho noho ny fandanjalanjana lehibe ananany amin'ny fampisehoana ireo fahaiza-manao ilaina amin'ny mpivarotra hahafahany manatanteraka paikady marketing ara-tsosialy mahomby. Raha ny hevitro, izaho manokana dia tsy hanome torohevitra ny mpianatra na ny matihanina mba handeha amin'ny làlana hanjary hakingana amin'ny serasera fotsiny. Ny media sosialy dia fantsona iray amin'ny paikady marketing amin'ny ankapobeny. Tokony hiasa ho lasa manam-pahaizana momba ny marketing miaraka amin'ireo fahaiza-manao ireo ianao - ary koa hahatakatra ny fomba ifandraisan'izany amin'ny paikadin'ny marketing amin'ny Internet amin'ny ankapobeny.
Ny orinasa dia miha mahazo vahana amin'ny haino aman-jery sosialy hampiakatra ny vokariny amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo mpihaino sy fizarana atiny izay manabe, mampiala voly ary manazava. Saingy efa nanontany tena ve ianao hoe iza no ao ambadik'ireny kaonty eto amin'ity tontolon'ny marketing ara-tsosialy sosialy vaovao? Ity sary eto ambany ity dia hijerena ireo mpamosavy marketing ao ambadiky ny tontolon'ity tontolo virtoaly ity, ny lalana mety mankany amin'ny asa aman-draharaha amin'ny varotra media sosialy, ary ny fomba fijery tena misy eo amin'ireo mpivarotra virtoaly ireo. Infographic amin'ny alàlan'ny Schools.com
Tags: fanabeazanasekolysekoly.commanam-pahaizana momba ny haino aman-jery sosialymanam-pahaizana momba ny varotra sosialy
Manokana ny taom-baovao - sary an'arivony amin'ny $ 9.95!
Jan 8, 2014 ao amin'ny 10: 14 AM
Misaotra anao, Douglas, amin'ity sombin-javatra mahasoa ity. Mampahatsiahy mahasoa ny habetsaky ny lafin-javatra misy eo amin'ny fomba fiasa amin'ny haino aman-jery sosialy feno, tsy misy afa-tsy ny marketing amin'ny ankapobeny amin'izao andro izao.